गाह्रो बाटो - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
लेख > दिन-द्वारा-दिन > कठिन बाटो
जब हामी हाम्रो मार्ग देख्न सक्दैनौं तब हामी के गर्छौं? जीवनले ल्याउने चिन्ता र समस्याहरू बिना यो जीवनमा पस्न सम्भव छैन। कहिलेकाँही ती लगभग असहनीय हुन्छन्। जीवन, यो देखिन्छ, कहिलेकाँही अनुचित छ। किन यस्तो छ? हामी जान्न चाहन्छौं। धेरै अप्रत्याशित विपत्तिहरू हामीलाई र हामी यसको मतलब के हो भनेर चिन्ता गर्छौं। यो कुनै नयाँ कुरा छैन, मानव इतिहास गुनासोले भरिएको छ, तर यो क्षणमा यी सबै जान्न सम्भव छैन। तर जब हामीसँग ज्ञानको अभाव छ, परमेश्वरले हामीलाई बदलामा केहि दिनुहुन्छ, जसलाई हामी विश्वास भन्छौं। हामीसंग विश्वास छ जहाँ हामीसँग सिंहावलोकन र पूर्ण समझ छैन। यदि ईश्वरले हामीलाई विश्वास दिनुहुन्छ भने, हामी विश्वासमा अगाडि बढ्छौं, यदि हामी देख्न, बुझ्न वा बुझ्न सक्दैनौं भने के हुन्छ कसरी जान्छ।
जब हामी कठिनाइहरूको सामना गर्दछौं, भगवान्ले हामीलाई विश्वास गर्दछन् कि हामी एक्लै बोझ बोक्नु पर्दैन। जब झूट बोल्न नसक्ने भगवानले कुनै कुराको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने यो वास्तविकता नै देखिन्छ। कठिन समयमा परमेश्वर हामीलाई के भन्नुहुन्छ? १ कोरिन्थी १०, १ 1 मा पावलले हामीलाई भन्छन् «तपाईमा मानव बाहेक अरू कुनै कुराले परिक्षा पाएको छैन; तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जो तिमीहरूलाई आफ्नो धनसम्पत्तिले प्रलोभनमा पार्न दिनुहुन्न, तर प्रलोभनको निकास पनि सिर्जना गर्नुहुनेछ ताकि तपाईं यो सहन सक्नुहुनेछ। »
यसलाई समर्थन र व्यवस्था 5१, and र by द्वारा वर्णन गरिएको छ: firm दृढ र स्थिर रहनुहोस्, नडराउनुहोस् र उनीहरूसँग नडराउनुहोस्! किनभने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर तिमीहरूसंगै जानुहुन्छ। उसले तिम्रो हातबाट तान्ने छ र तिमीलाई छोडने छैन। तर परमप्रभु तिमीसितै हुनुहुन्छ। ऊ तिम्रो साथमा आउनेछ र तिमीलाई तिम्रो हातबाट तानिने छैन्। नडराऊ र नडराऊ। »
हामी के हुँदैछ वा हामी कहाँ जान्छौं भन्ने कुराले फरक पार्दैन, हामी कहिले एक्लै गर्दैनौं। तथ्य यो छ, भगवान पहिले नै हाम्रो लागि पर्खनुभएको छ! उहाँ हाम्रोलागि एक मार्ग तयार गर्न अगाडि हुनुहुन्छ।
भगवानले हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासलाई हामी बुझौं र विश्वासले जीवनले हामीलाई दिन सक्ने हरेक कुराको सामना गरौं।
डेभिड स्टर्क द्वारा